Mgbe ndị na-esoghị mee Ememme Ngabiga ga-eme ya (1-14)
Ígwé ojii na ọkụ pụtara n’elu ụlọikwuu (15-23)
9 Jehova gwara Mosis okwu n’ala ịkpa Saịnaị n’ọnwa nke mbụ+ n’afọ nke abụọ ha pụtachara n’Ijipt, sị: 2 “Ndị Izrel ga-akwadebe anụ e ji eme Ememme Ngabiga+ n’oge ya a kara aka.+ 3 N’abalị iri na anọ n’ọnwa a, ná mgbede,* unu ga-akwadebe ya n’oge ya a kara aka. Unu ga-akwadebe ya otú e nyere n’iwu nakwa otú e kwuru ka e si na-akwadebe ya.”+ 4 Mosis wee gwa ndị Izrel ka ha kwadebe anụ e ji eme Ememme Ngabiga. 5 Ha kwadebere anụ e ji eme Ememme Ngabiga n’ala ịkpa Saịnaị n’ọnwa nke mbụ, n’abalị iri na anọ n’ọnwa ahụ, ná mgbede.* Ndị Izrel mere ihe niile Jehova nyere Mosis n’iwu. 6 Ma e nwere ụmụ nwoke na-adịghị ọcha maka na ha metụrụ ozu mmadụ* aka,+ nke mere na ha enweghị ike ịkwadebe anụ e ji eme Ememme Ngabiga n’ụbọchị ahụ. N’ihi ya, ha bịakwutere Mosis na Erọn n’ụbọchị ahụ,+ 7 sị Mosis: “Anyị adịghị ọcha maka na anyị metụrụ ozu mmadụ* aka. Gịnị mere na a gaghị ekwe ka anyị soro chụọrọ Jehova àjà n’oge a kara aka n’Izrel?”+ 8 Mosis wee sị ha: “Cherenụ n’ebe ahụ ka m nụ iwu Jehova ga-enye gbasara unu.”+ 9 Jehova gwaziri Mosis, sị: 10 “Gwa ndị Izrel, sị, ‘Ọ bụrụgodị na onye ọ bụla n’ime unu ma ọ bụ n’ọgbọ unu ndị na-esote unu adịghị ọcha maka na o metụrụ ozu mmadụ* aka+ ma ọ bụkwanụ na ọ gara ebe dị ezigbo anya, ọ ka ga-akwadebe anụ e ji eme Ememme Ngabiga a na-emere Jehova. 11 Ọ ga-akwadebe ya n’ọnwa nke abụọ,+ n’abalị iri na anọ, ná mgbede.* Ọ ga-erikọta ya na achịcha na-ekoghị eko na akwụkwọ nri ndị na-elu ilu.+ 12 Ọ gaghị ahapụ ihe ọ bụla n’ime ya ruo ụtụtụ.+ Ọ gaghịkwa agbaji ọkpụkpụ ya ọ bụla.+ Ọ ga-akwadebe ya otú e nyere n’iwu ka e si na-akwadebe Ememme Ngabiga. 13 Ma ọ bụrụ na mmadụ dị ọcha, e nweghịkwa ebe ọ gara, ma ya ahapụ ịkwadebe anụ e ji eme Ememme Ngabiga, a ga-egbu onye ahụ*+ n’ihi na o wetaraghị Jehova onyinye ya n’oge a kara aka. Onye ahụ ga-aza ajụjụ maka mmehie ya. 14 “‘Ọ bụrụ na onye mbịarambịa binyeere unu, ọ ga-akwadebekwa anụ e ji eme Ememme Ngabiga a na-emere Jehova.+ Ọ ga-eme ya otú e nyere n’iwu nakwa otú e kwuru ka e si na-eme ya.+ Otu iwu ga na-achị unu, ma onye mbịarambịa ma nwa afọ ala unu.’”+ 15 N’ụbọchị a mara ụlọikwuu ahụ,+ ígwé ojii kpuchiri ụlọikwuu ahụ, ya bụ, ụlọikwuu igbe ọgbụgba ndụ dị na ya.* Ma ná mgbede, ihe yiri ọkụ kwụ n’elu ụlọikwuu ahụ ruo n’ụtụtụ.+ 16 Ọ bụ ihe nọ na-eme: Ígwé ojii na-ekpuchi ya n’ehihie, ihe yiri ọkụ akwụrụ n’elu ya n’abalị.+ 17 Mgbe ọ bụla ígwé ojii ahụ si n’elu ụlọikwuu ahụ pụọ, ndị Izrel na-akwali ozugbo.+ Ndị Izrel na-amakwa ụlọikwuu n’ebe ígwé ojii ahụ kwụsịrị.+ 18 Ndị Izrel na-akwali ma Jehova nye ha iwu ka ha kwalie. Ha na-amakwa ụlọikwuu ma Jehova nye ha iwu ka ha maa ụlọikwuu.+ Ha na-anọ n’ebe ha mara ụlọikwuu n’oge niile ígwé ojii kwụ n’elu ụlọikwuu ahụ. 19 Ọ bụrụ na ígwé ojii ahụ akwụrụ n’elu ụlọikwuu ahụ ruo ọtụtụ ụbọchị, ndị Izrel na-erubere Jehova isi ghara ịkwali.+ 20 Mgbe ụfọdụ, ígwé ojii ahụ na-akwụrụ n’elu ụlọikwuu ahụ ruo ụbọchị ole na ole. Ha na-anọrọ n’ebe ha mara ụlọikwuu ma Jehova nye ha iwu ka ha nọrọ. Ha na-akwalikwa ma Jehova nye ha iwu ka ha kwalie. 21 Mgbe ụfọdụ, ígwé ojii ahụ na-anọ naanị ná mgbede ruo n’ụtụtụ. Ọ na-abụ ígwé ojii ahụ pụọ n’ụtụtụ, ha akwalie. Ma ígwé ojii ahụ ọ̀ pụrụ n’ehihie ma ọ̀ bụ n’abalị, ha na-akwali.+ 22 Ma ọ̀ bụ ụbọchị abụọ ma ọ bụ otu ọnwa ma ọ bụ karịa ka ígwé ojii ahụ kwụ n’elu ụlọikwuu ahụ, ndị Izrel na-anọ n’ebe ha mara ụlọikwuu, ha anaghị akwali. Ma ọ pụọ, ha na-akwali. 23 Ha na-ama ụlọikwuu ma Jehova nye ha iwu ka ha maa ụlọikwuu. Ha na-akwalikwa ma Jehova nye ha iwu ka ha kwalie. Ha na-erubere Jehova isi ma Jehova si n’ọnụ Mosis gwa ha ihe ha ga-eme.
^ Na Hibru, “a ga-esi ná ndị ya gbupụ mkpụrụ obi ahụ.”